सामसङ ग्यालेक्सी एस२० अल्ट्रा बजारमा, १ लाख ६० हजार रुपैयाँ पर्ने फोनको विशेषताहरु हेर्नुस् - Technology Khabar
» सामसङ ग्यालेक्सी एस२० अल्ट्रा बजारमा, १ लाख ६० हजार रुपैयाँ पर्ने फोनको विशेषताहरु हेर्नुस्
Technology Khabar ८ असार २०७७, सोमबार
सामसङले नेपाली उपभोक्ता समक्ष आफ्नो अभूतपूर्व प्रविधि सहितको सामसङ ग्यालेक्सी एस२० अल्ट्रा फोन प्रस्तुत गरेको छ । कम्पनीले यो फोन आफ्नो एस२० र एस २० प्लसको सफलता एवं विश्वास पछि प्रस्तुत गरेको हो । यसमा कम्पनीले नयाँ क्यामरा आर्किटेक्चर एआईलाई समावेश गरेको छ । सामसङको एआईमा भएको वृहत् इमेज सेन्सरले उच्चस्तरीय फोटो खिच्ने स्वतन्त्रता प्रदान गर्दछ ।
यसको साथै यस फोनले सहज एवं राम्रो तरिकाले- व्यक्तिगत संगीतको मनोरञ्जन, भिडियोहरुको जीवन्तता एवं अन-द-गोको अवस्थामा पनि विभिन्न खेलहरुको मज्जा लिन सकिने कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
‘व्यक्तिहरुको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनकै लागि सामसङले नयाँ जेनेरेसन डिभाइसहरु प्रस्तुत गर्दै आएको छ । यसैको सिलसिलामा एआई प्रविधि युक्त क्यामरा प्रस्तुत गरेको छ । ग्यालेक्सी एस२० अल्ट्रा ले सहज एवं राम्रो तरिकाबाट आफ्ना प्रियजनहरुको जीवन्त अनुभवहरुलाई कैद गर्ने क्षमता प्रदान गरेको छ,’ सामसङ मोबाइल नेपालका प्रमुख प्रणय रत्न स्थापितले भने ।
फोटो खिच्ने तरिकालाई परिवर्तन गर्दै
स्मार्टफोनबाट अब फोटो खिच्नु भन्दा बढी, हामी हाम्रो जीवनका पलहरुलाई कैद गरी आत्मकथाका रुपमा प्रस्तुत गर्दछौं, नयाँ स्मार्टफोन किन्नुको प्रमुख कारण पनि यही हो । त्यसैले ग्यालेक्सी एस२० अल्ट्रा को डिजाइन नयाँ क्यामरा सिस्टमको साथ गरिएको छ जसमा—एआईको साथ अझै राम्रो इमेज सेन्सरको प्रयोग गरिएको छ, जसले गर्दा हरेक क्षणहरुलाई उत्कृष्टताको साथ कैद गर्न सकिन्छ ।
विस्तृत विवरण सहितको आश्चर्यजनक फोटो खिच्ने क्षमता
ग्यालेक्सी एस२० अल्ट्रामा भएको वृहत इमेज सेन्सरले उच्चतम रिजोलुसनको फोटो खिच्दछ । कुनै पनि फोटोलाई एडिट, क्रपिङ्ग तथा जुमिङ्ग गर्न थप सहजता प्रदान गर्दछ । यो स्मार्टफोनमा १०८ मोगापिक्सेलको क्यामरा रहेको छ । यसमा भएको अर्को सुविधा भनेको वृहत् सेन्सर हो, यसले धेरै प्रकाश लिने गर्दछ, जसले गर्दा कम उज्यालको अवस्थामा पनि उत्कृष्ट फोटो खिच्न सकिन्छ । यसमा भएको सेटप फिचरले क्यामरालाई अधिकतम १०८ मेगापिक्सेलको मोड र १२ मेगापिक्सेलको मोडमा तय गर्ने सुविधा प्रदान गर्दछ । नोना बाईनिङ्ग प्रविधिको संयोजनले एक सेन्सर लेभलमा नौ पिक्सल राख्न सक्दछ ।
अभूतपूर्व जुम क्षमताः
ग्यालेक्सी एस२० अल्ट्राको स्पेस जुम प्रविधिले हाइब्रिड अप्टिक जुम तथा सुपर रिजोलुसन जुमलाई आत्मसाथ गरेको छ, जहाँ एआई पावर्ड डिजिटल जुमले जति नै टाढा रहेको अवस्थमा तपाई नजिकै ल्याई फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ । यसमा अद्वितीय फोल्डेड लेन्स राखिएको छ, जसबाट मल्टि इमेज प्रोसेसिङ्ग गरी इमेजको गुणस्तरीयता कायम गरी जुम गर्न सकिन्छ । यसबाट १००एक्सको जूम गरी सफा फोटो खिच्न सकिन्छ ।
क्यामराबाट लिइएको एउटै टेकलाई विभिन्न प्रकारमा लिन सकिन्छ । यसको क्यामरामा भएको एआई प्रविधिले, विभिन्न संख्यामा फोटो तथा भिडियोहरु खिच्छद, जस्तैः यसबाट लाइभ फोकस, कर्पड्, अल्ट्रावाइड तथा अन्य धेरै उत्कृष्ट प्रकारहरुमा आफ्ना क्षणहरु कैद गर्न सकिन्छ ।
उच्चस्तरीय फिल्मिङ क्षमता
ग्यालेक्सी एस२० अल्ट्रा ले ८के भिडियो खिच्ने क्षमता राख्दछ, यसले गर्दा प्रयोगकर्ताले उच्चस्तरीय एवं प्राकृतिक संसारलाई जस्ताको तस्तै कैद गर्न सक्नुहुन्छ । आफूले भिडियो खिचिसके पछि त्यसलाई सामसङको क्यूएलईडी ८केमा उच्चस्तरीय अनुभवका साथ हेर्न सकिन्छ र त्यहाँबाट हाइरेज फोटोमा परिवर्तन गर्न पनि सकिन्छ । यसमा भएको एआई मोसन एनालिसिस साथ सुपर स्टेडी तथा एन्टि रोलिङ्ग स्टेविलाइजेशजले एक्सन क्यामले खिजेको जस्तै गरी खिच्न सकिन्छ ।
तपाइँलाई मनपर्ने भन्दा, बढी गर्नुहोस्
फोनमा सहज एवं उत्कृष्ट रुपमा सोचेभन्दा धेरै गर्न सकिन्छ । यसमा भएका विभिन्न फिचरहरु तथा अन्य विभिन्न सेवा प्रदायकहरुसँग गरिएको साझेंदारीका कारण अझै बढी सुविधा प्राप्त गर्न सकिन्छ । यो फोन आज कसरी फोनको प्रयोग गर्ने भन्न ग्राहकहरुको लागि निर्माण गरिएको हो ।
युट्युवः ८के भिडियोको लागि सामसङले युट्युवसँग सहकार्य गरेकोछ, यसबाट तपाइँले आफ्नो भिडियोहरु संसार सामु सहजै सेयर गर्न सक्नुहुनेछ । तपाइँले मोबाइलमा खिचेका भिडियोहरु सोझै युट्युवमा अपलोड गर्न सक्नुहुने छ ।
गेमिङ्गः यसमा नयाँ जमानाको गेमिङ्गको मज्जा लिन सकिन्छ । यसको १२० हर्ज डिस्प्लेले कुनै पनि गेम खेल्दा स्मुथ गेमिङ्गको मज्जा दिन्छ । फोनमा भएको फास्ट प्रोसेसर, १२ जीवी र्याम, एकेजी अडियो तथा गेम बुस्टर जस्ता विशेषताले फोन चलाउनुको वेग्लै अनुभव प्रदान गर्दछ ।
ग्यालेक्सी एस२० अल्ट्रा फोन जुन महिनाको २३ तारिखदेखि नेपालका सामसङ ब्राण्ड स्टोरहरुमार्फत विक्री गरिने छ । यो फोनको नेपाली बजारमा मूल्य रु. १ लाख ५९ हजार ९९९ रुपैयाँ तय गरिएको छ ।
यो फोन सेट विभिन्न दुई कलर कस्मिक ब्ल्याक तथा कस्मिक ग्रेमा उपलब्ध हुनेछ ।
ग्यालेक्सी एस२० अल्ट्राको खरिदमा ग्राहकले निःशुल्क रुपमा ग्यालेक्सी बडस् प्लस प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, इ. एम. आइ. को सुविधा, १ वर्षसम्मको ब्रेकेज इन्स्युरेन्स तथा एक्स्चेन्ज सुविधा पनि प्राप्त गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।
प्रकाशित: ८ असार २०७७, सोमबार
क्यूआर कोडको प्रयोग बढ्दै, अब तरकारी बजार, चिया पसल र ट्याम्पोमा पनि प्रयोग
आइएमईले घर–घरमा नै रेमिटेन्सको सुविधा पुर्याउँदै, अब सिधै आइएमई पे वालेटमा प्राप्त गर्न सकिने